Al Baghdadi ka dib, mustaqbalka IS muxuu noqon doonaa? - BBC News Somali
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa shalay shaaciyay in hoggaamiyihii kooxda isku magacawday Khilaada Islaamka, Abubakar Al Baqdaadi, lagu dilay hawlgal ciidanka Mareykanka ay ka sameeyeen waqooyi galbeed ee dalka Suuriya.
Madaxweyne Trump oo warbaahinta kula hadlayay Aqalka Cad ayaa sheegay in Abuu Bakar Al-Baqdaadi uu qarxiyay jaakaddii uu xirnaa oo ay ku rakibnaayeen walxaha qarxa, ka dib markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay uga daba galeen god uu ku cararay.
Abuu Bakar Al-Baqdaadi ayaa soo shaac baxay sannadkii 2014, xilligaas oo uu magaalada Moosil uga dhawaaqay "Dowlad Islaami" ah oo ka shaqeysa waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
Al Baqdaadi oo mar maamulayay sideed milyan oo qof iyo balaayiin doollar oo lacag ah oo ay canshuur ahaan uga qaadeen deegannaadii ay maamulayeen ayaa intii uu hoggaamiyaha ahaa, waxay kooxdaas dileen dad badan oo qaar la gubay, kuwa kalena la gowracay.
Weriyaha BBC-da ee arrimaha ammaanka, Frank Gardner, ayaa sheegay in arrintan ay iska caddahay in dhabar jab ay ku tahay kooxda IS, balse aysan ka dhigneyn dhammaadka ururka la baxay Dowladda Islaamka.
Wuxuu sidoo kale sheegay in qofkale oo isaga badelana ay magacaabi doonaan IS.
Dalalka xulafada la ah Mareykanka, oo uu ka mid yahay Faransiiska ayaa sheegay in weli ay jiraan jiro haraadiga kooxdan.
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, oo ka hadlay dhimashada Al Baqdaadi ayaa sheegay in ay dhabar jab ku tahay ururka, dalkiisana uu ka shaqeyn doona sidii loo baabi'in lahaa inta ka hartay kooxdaas.
Dowladda Britain ayaa dhankeeda sheegtay in tallaabadii lagu dilay hogaamiyaha IS ay ahayd mid muhiim ah, balse aysan ka dhigneyn dhammaadka Ururkaas isgu yeeray Khilaafada Islaamka.
Dadka darsa arrimaha carabta ayaa aaminsan in dhimashada Al Baqdaadi ay la mid tahay dilkii Osama Bin Laden, oo markii la dilay kooxda Al Qaacida ay magacawday qofkale, sii lo sii wado howlaha kooxda.
Kooxda IS oo hadda u muuqata in laga qabsaday deegaano badan, dalalka reer galbeedkana ay shegeen in laga adkaaday ayaa lahayd hami wey oo ah in ay sameyso dowlad Islaami ah, fikirkaas oo ka duwan kan Al Qaacida oo inta badan ku hawlanaa sidii ay ula dagaalami lahaayeen reer galbeedka.
Qaabkee loo dilay Al Baqdaadi?
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa shalay geliinkii dambe sheegay in Al Baqdaadi uu u dhintay sidii "eygii oo kale".
Wuxuu intaa raaciyay in markii uu dhimanayay uu barooranay, kahor intuusan is qarxinin.
Trump ayaa sheegay in Abuu Bakar Al-Baqdaadi uu ku cararay god dhulka hoostiisa ah isaga oo ay ceyrsanayeen eeyo ay wateen ciidamada Mareykanka.
"Xalay, Maraykanku wuxuu cadaalladda marsiiyay hoggaamiyaha kaalinta koobaad uga jira argagixisada caalamka. Abubakr Al-Baqdaadi wuu dhintay," ayuu yiri.
"Wuxuu ahaa hoggaamiyaha iyo asaasaha IS oo ah ururka ugu arxanka darran caalamka. Maraykanku wuxuu Al-Baqdaadi ku daba jiray sannado badan. Ma jiro wax khasaare ah oo ciidamadeena ka soo gaaray hawlgalkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid ah dagaalyahannada iyo asxaabta Al-Baqdaadi," ayuu hadalka ku sii daray Donald Trump.
"Wuxuu ku cararay god dhulka hoostiisa ah, waxaan ku dirnay oo godka uga dabagalay eeyadeenna. Wuxuu qarxiyay jaakaddii uu xirnaa isagoo dilay naftiisa iyo saddex canug oo uu watay. Jirkiisu wuxuu ku googo'ay qaraxa, Waxaana ku so dumay godka. Baaritaanka aan jirkiisa ku sameynay ayaa markiiba muujiyay inuu qofkaas yahay Al-Baqdaadi."
Trump wuxuu sidoo kale sheegay in 11 carruur ah laga soo badbaadiyay gurigii uu degganaa, wuxuu intaa ku daray in hadda dunida ay tahay mid amni ah, maadaama "la khaarijiyay ninkii ugu cadowsanaa dunida".